Yini engenziwa ekukhulelweni ekuseni, futhi nje kudingeka?
Uma owesifazane uthola ukuthi esikhathini esizayo esiseduze, iyakuphenduka umama, usetha uxhaxha nezindaba. Enye yezindlela ezibaluleke kakhulu elandelayo: lokho asikwazi ukwenziwa ekukhulelweni ekuseni?
Uma owesifazane eke wayevele ukubhekana isikhundla ezithakazelisa kangaka, ngokuqinisekile yena owazi impendulo yalo mbuzo. Futhi, ubulili fair kufanele wazi ukuthi yini okufanele uyenze ngesikhathi sokukhulelwa. Zama ukuqonda la maphuzu amabili futhi ufunde ukuthi baziphathe kanjani ngesikhathi abantwana.
Okokuqala, ake sithi, nkathi ebizwa ngokuthi ekuqaleni sokukhulelwa. Ngokushesha emva kokukhulelwa, insikazi isidoda amaseli uqale division okuqhubekayo we zygote. Ngasikhathi sinye, amaseli iphokophele umthondo.
Lapho iqanda eselivundisiwe ifinyelela kwesibeletho, it is ngokuphepha nasezinsikeni nodonga lwawo futhi ziqala ukumila. Kusukela ngaleso sikhathi, singasho ukuthi ukukhulelwa. Ngokuvamile leli gama ilingana amaviki amathathu noma amane wokubelethisa. Ngo ezinyangeni ezimbili ezizayo, odokotela bazokutshela ukuthi une-ekuqaleni yobudala sokukhulelwa.
Ngokwalokhu okungenhla kungenziwa baphetha ngokuthi inkathi zokuqala zokukhulelwa - isikhathi esingamasonto amathathu eshumini ukuthuthukiswa umbungu. Kwakuthinta ngalesi sikhathi, ingane yakho engakazalwa ubizwa ngokuthi umntwana.
Ukuthi baziphathe kanjani ekuqaleni ukukhulelwa?
Uma uvakashela udokotela ngalesi sikhathi, yena uzokutshela lokho okungafanele ukwenze kusaqalwa yokukhulelwa. Kuyadingeka ukukhumbula ngokucacile zonke imikhawulo sinamathela kuzo. Futhi Uchwepheshe uzokutshela ukuthi yini ongayenza ngesikhathi sokukhulelwa. Thina kwakha ebekwe imithetho esiyisisekelo sokuziphatha kwabesifazane sesimweni ezithakazelisayo.
Yini engenziwa ekukhulelweni ekuseni?
Kuyaphawuleka ukuthi eziningi zalezi zinyathelo eyayivumela umuntu ovamile, it is ngokuphelele contraindicated e abesifazane abalungiselela uba umama.
Okokuqala, lokho okungafanele ukwenze kusaqalwa zokukhulelwa, ukuba sifeze iyiphi indlela yokwelashwa. Uma ugula noma sezilufundile nomkhuhlane, kubalulekile ukulahla ukusetshenziswa ngisho innocuous iningi ekhaleni lehla. Zonke aphoyintimenti kumele kwenziwe ngudokotela. Kunemithi ukuthi avunyelwe ekuqaleni kokukhulelwa, kodwa indlela kungaba kwenziwe kuphela ngemva kokuthintana udokotela wezifo zabesifazane.
Kasibili contraindicated kunoma iyiphi antimicrobial nemithi elwa namagciwane. Uma kukhona abadinga ukwelashwa okunjalo, it is lihlehliselwe ezigabeni kamuva yokukhulelwa.
Kunezindlela eziningana vo ukuthi bayanqatshwa kusukela ekuqaleni kokukhulelwa. Kaningi, omama abakhulelwe ucelwa: "Kungenzeka yini ukuba senze esifubeni X-ray phakathi nenkathi yokukhulelwa?". Impendulo yalo mbuzo ochwepheshe ngazwilinye: "Akunakwenzeka. ' Ngokushesha ngemva kokuzalwa, bonke abesifazane kwenziwe inhlolovo, kodwa ngesikhathi sokukhulelwa is contraindicated.
Yini engase ishiwo nezinqubo izifo zabesifazane? Ingabe colposcopy phakathi nenkathi yokukhulelwa? zokukhwabanisa okunjalo futhi akuvumelekile. Noma yimuphi cwaningo wesibeletho kanye ebusweni engaphakathi umthondo kuthiwa selihlehliselwa ngemuva kokubeletha.
Futhi ekuqaleni sokukhulelwa akunakwenzeka ukwenza i x-ray. Sisebenza labo izimo lapho ungakwazi ukugwema le nqubo. Ngokwesibonelo, ekwelapheni amazinyo. Uma usuwele, futhi kukhona izinsolo ophukayo, udokotela angase afeze zokukhwabanisa enjalo, ikhumbula zonke izingozi.
Into elandelayo, okungakwazi kwenziwe ekuqaleni ekukhulelweni, iwukuba anamathele zabo imikhuba emibi. Uma ngibhema phambi akhulelwe ukuphuza utshwala, khona-ke isikhathi sokuyeka konke lokhu.
Ezigabeni zokuqala zokukhulelwa akhiwa zonke izitho ezibalulekile umntwana esikhathini esizayo. Uma kukhona umthelela ongemuhle ezinobuthi waba nomzimba omncane ngalesi sikhathi, kungaba nemiphumela ebuhlungu. Yiba wemfanelo futhi uyeke ukubhema ugwayi, ukuphuza utshwala futhi zonke izinto eziyingozi.
Yini esingayenza futhi okufanele siyenze lapho elinde ingane?
Manje uyazi ukuthi ukwenza ngesikhathi sokukhulelwa akuyona efiselekayo. Kukhona izinto ezingakenziwa kuphela kuvunyelwe, kodwa futhi kubalulekile kusaqalwa. Ake sihlole, ziyini.
izintokazi eziningi, ingane ukulinda, cela odokotela: "? Kuyingozi ukwenza i-ultrasound ekukhulelweni". Ultrasound kuyalimaza bangakwenzi.
Isikhathi sokulinda ngowesifazane ingane egcina ezintathu luhlolo isimiso, phakathi kwesikhathi lapho udokotela ehlola ngomntanakhe esikrinini ultrasound. Lokhu zokukhwabanisa kuyabaveza ukuthuthukiswa pathologies ezehlukene nele-embryo ne uwasuse ngesikhathi. Uma kunezinkomba zokuthi ukuhlolwa okunjalo kungaba ngaphezulu. Ukunqatshwa inhlolovo ibeka owesifazane basengozini enkulu, njengoba bobabili noma odokotela abazi ngesimo umbungu nokuthi ukukhulelwa kwenzeka.
Hlobo luni umzimba ukwenza ngesikhathi sokukhulelwa banakekele impilo yabo futhi kuvikelwe ingane?
Muva nje, kucelwe ezindaweni ezivame kakhulu ezilandelayo: ukuqina yoga kwabesifazane abakhulelwe. Owesifazane Ungakhetha okulungile wakhe. Odokotela batusa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ekuphileni ukubukela futhi ukubhukuda. Lokhu kuzosiza ugcine umzimba isesimweni esihle futhi ukulungele ukuhamba. Okuhlukile labo ezimweni lapho kunosongo ukukhipha izisu.
Ezigabeni zokuqala zokukhulelwa kubaluleke kakhulu ukuba udle ngokugcwele futhi yidla amavithamini ezidingekayo. Ezimweni eziningi, odokotela linqume owesifazane i-folic acid. It ehilelekile ukwakheka kwezitho nezicubu kuphela, futhi kusiza ngesikhathi bese uvale kahle neural tube.
Ngaphezu kwalokho, umama okhulelwe udinga iodine ngoba indlala yegilo usebenze kahle. Futhi, udokotela angase atuse ukuba reception magnesium, insimbi ne-potassium. Ochwepheshe abaningi bakhetha ngokushesha liqoke amavithamini abakhulelwe eziyinkimbinkimbi, kunokuba imikhiqizo olulodwa oqukethe namaminerali ewusizo.
umama okhulelwe kumele alandele ngokucophelela imithetho kwenhlanzeko. Kuyadingeka ukuba zigeze izandla njalo. Lokhu kusiza ukugwema izifo emathunjini bese amagciwane.
Kuyadingeka ukuqapha ukuhlanzeka umthondo. Ngemva ukuvela babekwazi nazo amabhaktheriya ukutheleleka umbungu. Uma kunesidingo, sebenzisa liner panty. Bazokusiza uzizwa ukhululekile.
Ngesikhathi esalinde isidingo sengane ukudla ngendlela efanele. Lesi simo awasebenzi kuphela ukukhulelwa ekuseni. Kuyadingeka ukuba sonke isikhathi esesibelethweni ingane phuza amavithamini (izithelo nemifino), amaminerali kanye ukulandelela izakhi.
Phuza ayo fresh futhi phumula. Uma kungenzeka, zama ukuchitha isikhathi esiningi bengaphandle. Baby manje udinga eziningi yomoya-mpilo ekukhuleni kahle ukwakheka zonke izinhlaka.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi ukuthi baziphathe kanjani ngenkathi elinde ingane. Ngaso sonke isikhathi khumbula ukuthi kubalulekile futhi kwasenza sakwazi ukwenza. Chest X-ray ngesikhathi sokukhulelwa, x-ray kanye nezinye izivivinyo, okuyinto kungalimaza eziphilayo ezincane, kungcono ukuhlehlisa isikhathi esithile. Ziqaphele wena ulandele iseluleko udokotela.
Kweso fetus nesonto: Izinga
Ulwazi mayelana nokukhulelwa - ezihlukahlukene isicelo
Tribulus: yokusetshenziswa, Izimo, izindleko.
Ukubhema ngesikhathi sokukhulelwa kuyingozi ngoba umama nengane yakhe
Female St Iver Monastery (Rostov-on-Don) futhi indaba yakhe
Injongo imfundo. Izinjongo imfundo yesimanje. inqubo ukwakheka
Yini igama slot amaprotheni? Kulokhu amaprotheni ophila?
Ukuzilungisa ngemoto: ekuqhutshweni kohlelo
Ukuvelela - ke ... prominences on the Sun
Ukukhumbula esikoleni anatomy Yiqiniso: lapho abantu lymph node